Posted by ZT at 1:49 AM
လူတော်တွေ အားလုံး ဆရာဝန် ဖြစ်နေကြရင်တော့ ငါတို့ နိုင်ငံအတွက် သိပ်မဟုတ်သေးဘူး လို့ ဆရာထင်တယ် ... ဟုတ်တယ်နော်
ဆရာ ဦးပြည်သိမ်းနဲ့ ကိုကျောင်းသားလေးကို လေးစားသွားပါတယ်။ ဆရာ ဦးပြည်သိမ်း လို ဆရာမျိုး အများကြီးပွားပြီး မြန်မာပြည်ကကျောင်းတိုင်းမှာ ဆရာဖြစ်စေချင်တယ်။ ကလေးတွေ့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကအစ တိုးတက်မှုတွေ အင်မတန် ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ် ထင်တယ်နော်။ အောင်မြင်မှုရဖို့ ဝါသနာလေးတွေ မလွဲမချော်နဲ့ တစိုက်မတ်မတ်လေး ကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေး ရလိုက်တယ်။
Ko ZT... i like ur posts. i just found out that u r from August. may be u r my senior from 96 batch.
i m from 97 batch. the top5students from ur batch are ma sann yu mon, ma thida aye, i forgot the other 3.
ဒီနေ့မနက် စာမေးပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့စ်ချည်း ၂ ပုဒ်ဆက်တိုက် ဖတ်လိုက်ရတယ်၊ ၂ ပုဒ်လုံးကို အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ။
သက်ဆိုင်တဲ့ ပို့စ်လင့်ကလေးတွေ လာပေးတာပါ။
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး အဲဒီကျောင်းသားလေးကို အားကျလိုက်တာနော... ဒီလိုရွေးချယ်ရဲတဲ့ သူရဲ့ခံယူချက်ကို လေးစားမိတယ်..
Anonymous-> Yes, I am from 96 batch. Nice to meet my schoolmates here. :D
I really envy you,Ko ZT...I get the encouragement and inspiration from your blog and Ko Andy's Blog.Thank you for sharing your knowledge.
အပေါ်က Anonymous ပြောသလိုပါပဲ။
ဂရုတစိုက်ဖတ်ရတဲ့ blog တွေ ထဲမှာ ဒီ blog ပါပါတယ်။
အားကျလိုက်တာ မီးချစ်တော့ ဆယ်တန်း ဘယ်လိုအောင်လာမှန်းကို မသိဘူး..
ကိုဇက်တီရေ ဒီစာလေးတွေဖတ်လိုက်ရတာ နဲနဲအားတက်လာတယ်။ ကျောင်းမတက်ချင်တဲ့စိတ်တွေကို အနည်းငယ်ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်လို့ စိတ်သက်သာမှုတွေရသွားတယ်။ သိပ်တော်တဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စူ့ထက်စူလူစွမ်းကောင်းနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကြောင့် အနော့် စိတ်တွေညစ်နေတာ နည်းနည်းပြေလျော့သွားတယ် ဆိုတာ
ပြီးတော့ မှန်တယ်လို့ပြောချင်တာ တစ်ခုက ၁၆ နှစ်မှာကိုယ့်အသက်မွေးလမ်းကြောင်းရွေးဖို့ စောလွန်းသေးတယ်ထင်တာပဲ။
ကျေးဇူးအကို အနော် follower လုပ်လိုက်ပြီနော်.....
အဲတော့ ။...မွှားသွားဘီ။ follower ကအစောကြီးထဲက လုပ်ပြီးသားကြီး။ ဟီးဟီး....အမြဲလာဖတ်မှာလို့ရေးတာ။။။ တွတ်ပီကံမကောင်းပါလားနော်။ မှားတင်မိပြီ။ အဟီး။။။
ကျွန်တော်လဲ St.Augustine ကျောင်းထွက်ပါပဲ။ အစ်ကိုတို့ ​ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်အမာကြည် ကိုကြုံခဲ့မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်က ၂၀၀၃ ဆယ်တန်းအောင်ဆိုတော့ အများကြီးငယ်ပါတယ်။
အင်း သာမန်လူတွေဆိုရင် သူတော်တာကို သိတောင်သိပါ့မလား။ ခုက သူ့အဖေကြောင့် သူတော်ရက်နဲ့ ဂုဏ်ထူးတန်းမဝင်တာကို သိကြတာ။ သာမန်လူတွေထဲက တော်တဲ့လူတွေမှာ ခုလိုအဖြစ်ကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာ ထွက်သွားရတာ ရှိနိုင်မယ်ထင်တယ်။
အဲလိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရွေးရဲတာ သူတော်တာလည်းပါသလို ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတာလည်းပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၀ တန်းအောင်လို့ နိုင်ငံခြားထွက်လာပြီး Poly လာတက်သော်လည်းပဲ မိမိရွေးခဲ့သော Engineering ကို ယခ ုအလွန်းမုန်းတီးမိနေပါတယ်
Anoymous 10:53 PM
Poly နဲ့တော့ Engineering ကို စိတ်မပျက ်ပါနဲ့ဦး။ :D တကယ့် Engineering က အဲဒီထက်မက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ University ရောက်ရင် ဒီထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာတွေ တွေ့ရဦးမှာပါ။ အစ်ကို ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဖူးလို့ ပြောတာပါ။
တကယ် စိတ်ပျက်သွားပြီ ဆိုရင်လည်း အချိန်ရှိပါသေးတယ်။ အစ်ကိုနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် Poly က ကျောင်းပြီးလို့ သုံးနှစ် အလုပ်လုပ်ပြီးမှ U.S သွားပြီး သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာကို အစအဆုံး ပြန်ယူတာလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ စိတ်ဓာတ် ရှိဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
တော်သူများအားလုံးကို လေးစားပါတယ်၊ တို့တော့ တော်တော်ပိန်းတယ်း)
ရွေးချယ်ခွင့် ရခဲ့တာ ကံကောင်းတာပေါ့
ကိုဇက်တီ… ကျနော့်နာမည်ကို ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။
(ဟဲဟဲ…. လူအထင်ကြီးအောင် လာပြီး ပုံမှားရိုက်ကြည့်တာဗျ။)
အမလဲ သြဂတ်စ်တင်း ထွက်ပါဘဲ ..
ဆရာ ဦးပြေသိန်း က အလွန်တော်တဲ့ဆရာပါ..
ဘိုင်အိုမှာထိုင်မငို ရအောင် သင်ပြပေးနိုင်တယ် ..
ပုံဆွဲတာလဲ သိပ်လှတယ်လေ .. ပိုးဟပ် . ဖား ။ ပဲစေ ့အပင်ပေါက်တဲ့ ပုံလေးတွေ မြင်ယောင်မိနေသေးတယ်။
စိတ်မကောင်းစရာ တခုကတော့ ဆရာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၃- ၄ နှစ်လောက်မှာ ဆုံးရှာပြီ လို့ သိရတယ် ။ တော်တဲ့ဆရာတယောက် ချို ့ချို ့တဲ ့တဲ ့နဲ ့ဆုံးသွားရ မှန်းသိရလို့ပို ဝမ်းနည်း မိပါတယ် ..
(ဆရာ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာ့တပည့်လို အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လိုင်းတွေ မရွေးဘဲ ကိုယ်ဝါသနာ ပါပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မဟုတ်တဲ့ လိုင်းကို ရွေးသွားတယ် ဆိုတဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။ အမှတ်ကောင်းတဲ့သူ အားလုံး နိုင်ငံခြား ထွက်သွားတဲ့ သူတွေ ကလွဲလို့ အားလုံး ဆေးတက္ကသိုလ်၊ စက်မှု တက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်နဲ့ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် တွေကိုပဲ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ရောက်သွား ကြတာပါပဲ။ စက်မှုတက္ကသိုလ် တက်ခွင့်ရရဲ့ သားနဲ့ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ရွေးသွားတယ် ဆိုတာလောက်ပဲ ကြားရတာ ရှိခဲ့ပါတယ်။)
အဲဒါ ရွေးရဲတဲ့ သတ္တိရှိ မရှိ ဆိုတာထက် ကိုယ့်ဘာသာ ဘာဝါသနာပါလို့ပါမှန်း မသိကြတာကြောင့်က ဘယ်နှစ်ယောက်ပါမလဲမသိ။
ပြီးတော့ ၁၆ နှစ်က ကိုယ်သွားမယ့် လမ်းကြောင်းကို ရွေးဖို့စောတာလဲ မှန်ပေမဲ့ ဒီ့ထက်နောက်ကျပြီးမှ ရွေးခိုင်းလဲပဲ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဘာမှ များများစားစား မရှိပါဘူး ထင်မိတယ်။
မြန်မာပြည်က ဂုဏ်ထူးတန်းမဝင်တဲ့လူက နိုင်ငံခြားက ဒေါက်တာဘွဲ့ရသွားတယ်ဆိုတာပဲ ခဏခဏ စဉ်းစားနေမိတော့တယ်။
ဘာပဲပြောပြော သူ့မှာ အသိုင်းအဝိုင်း ကံကောင်းလို့ တော်ပါသေးရဲ့။
ရေခံမြေခံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးသတိရသွားမိတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ resistor value တွေကျက်နေတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေ ထိတွေ့ဖူးတဲ့ လူက မျက်စိမှိတ်ရွတ်ပြနိုင်တဲ့အချိန်လေးတွေပေါ့။ ဆယ်တန်းအောင်ရင် အသက်မွေးမှုတစ်ခုခုတက်ရမှဆိုတဲ့ အယူအဆကိုလည်း လက်မခံမိဘူး။ ပြီးတော့ ကိုယ်လျှောက်မယ့် ကိုယ့်ဘဝလမ်းကို မိဘဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေ ဂုဏ်ယူဖို့အတွက် ဆရာဝန်လိုင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်တွေ မြင်တွေ့ဖူးပါတယ်။ အခုလိုဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ...
သိပ်မှန်တာပေါ့ မြန်မာ နှိင်ငံမှာ ဆရာ ဝန် မလုပ်ရင်ပဲ ဂုဏ်ငယ်တယ်ထင် နေ ကြတယ်. ပြီးတော့ တကယ်လဲဖြစ်အောင်မလုပ်ကြဘူး။ ပေါ်ပင်ပဲ ။
၁၆နှစ်တုန်းက ဘာဝါသနာပါမှန်းကို မသိခဲ့ဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ကောင်းတာလေးတွေ ရွေးလျှောက်တော့ လျှောက်တဲ့လိုင်းကလည်း ၅မှတ်လိုတာနဲ့ မရလိုက်ဘူး။
ဒီမှာတော့ ၄တန်းကတည်းက စောစောစီးစီး လိုင်းခွဲသွားကြတယ်။ စာတော်တဲ့ ကလေးက တက္ကသိုလ်ဝင်လို့ရတဲ့ ကျောင်းကိုသွားတယ်။ စာမလိုက်နိုင်တဲ့ ကလေးက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတခုခုသင်မယ့် ကျောင်းဖက်ပြောင်းကြတယ်။ ကလေးမိဘနဲ့ ဆရာတွေက တူတူဆုံးဖြတ်ကြတယ်။
ko zaw thet gyi sar yae kaung tal taut.
အဲဒီ ဖီဆစ္ေမဂ်ာကိုဘဲ ေရြးသြားတဲ့ အစ္ကို ၾကီး ျဖစ္ရပ္က ညီမ ဦးေလးျဖစ္ရက္နဲ႔တူေနသလားလို႔ ဟုတ္ခ်င္မွလဲ ဟုတ္မွာပါ။တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္မို႔ပါ ။
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ပါ ဘ၀မွာ ကိုယ္၀ါသနာပါရာကို သတိၱရွိရွိရင္ဆိုင္ရဲ ေျပာရဲ ဆိုရဲ ျပီးယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ေလွ်ာက္လွမ္း ရဲ႕ တဲ့သူတစ္ေယာက္ မို႔ လူေတာ္တစ္ေယာက္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ေနာက္ျပီး သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္ အေပၚမွာ ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ရွိတ့ဲ ဖခင္တစ္ေယာက္ကိုလည္းေလးစားမိပါတယ္။
ပထမ - ျမန္မာနိုင္ငံလိုေနရာမ်ဳိးမွာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ တိုးတက္ေသာ အေတြးအေခၚ ရွိရွိျဖင့္ သားျဖစ္သူကို ျပဳစု ပ်ုဳိးေထာင္ေပးေသာ မိဘ ႏွစ္ပါးကို အထူူးေလးစား ရပါ တယ္။
ဒုတိယ- ပတ္ဝန္းက်င္လႊမ္းမိုးမူကို တြန္းလွန္ ျဖိဳဖ်က္နိုင္ၿပီး မိမိယုံၾကည္ျမတ္နိုးရာကို ရဲဝ့ံစြာ ဆုတ္ကိုင္ ခ်ီတက္နိုင္ခဲ့ ေသာ ေက်ာင္းသားကို ေလးစားပါတယ္။
တတိယ- တပည့္ဟာ ဆရာထက္ေတာ္ရမယ္ဆိုတာကို တကယ္လက္ခံ က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး အမွန္ကို ဝန္ခံရဲ၊ေဖၚထုတ္ရဲ ၿပီး၊ တပည့္အေပါင္းကို လမ္းေၾကာင္းအမွန္ကို ညႊန္ျပခဲ့ ေသာ ဆရာ ဦးျပည္သိမ္းကို အထူးေလးစား ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ဒီလို ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကို သိသင့္သိထိုက္ သည့္ ျဖစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပို႕စ္တင္ေပးသူ ဖူးနုသစ္ကို ေလးစားပါေၾကာင္း။
ဆယ္တန္းမွာ physics definations ေတြကို အလြတ္က်က္ခိုင္းျပီး
အတန္းမတက္ခင္ chapter 1 to current chapter ထိ ဆိုခိုင္းတဲ့
က်ဴရွင္ဆရာနဲ ့ၾကံဳဖူးပါတယ္...၊ but don't
think so much at that time and just by heard.
Then later when I attend foreinging uni, I was dying and suffering
in the whole academic year.....